Culimada Iyo Guddiga Gurmadka Yemen oo Ambabixiyey Qoysas ka yimid Yemen [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Culimada Iyo Guddiga Gurmadka Yemen oo Ambabixiyey Qoysas ka yimid Yemen [Sawirro]
Culimada iyo Gurdiga gurmadka qaxootiga yemen ee Puntland ayaa galabtay raray qooxi gaaraya 300 oo qof , waxaana dadkani ku wajahan yihiin koonfurta Soomaaliya gaar ahaan muqdisho .
Dadkaan qaxootiga ah ayaa waxay kamid ahaayeen, qaxooti gaaraya 3502 qof oo soo gaaray maagalada boosaaso galabnimadii khamiista lasoo dhaafay ku waasoo kasoo cararay dagaalada yemen ka aloosan .
Dhaqaalaha lagu ambabixiyey ayaa waxuu qayb ka yahay lacagiihii shirkadaha iyo bulshada soomaaliyeed ay soo gaarsiiyeen culimada iyo gudiga gurmadka si gaar ah lacagta maanta lagu rarayo qaxootigan ayaa qayb ka ah lacagihii ay bixiyeen jihooyinka ka ah :,beesha wabeeneye, jaaliyada soomaaliyeed ee saldanada cumaan , gudiga badbaadada qaxootiga soomaaliyeed ee muqdisho ,dadweynaha soomaaliyeed ee gudaha iyo dibada dalka iyo ha’ada harro .
Qaxootigaan ay culimadu iyo gudiga gurmadku ambaxiyeen ayaa waxaa lagu raray 15 bas waxaana qof walba lagu lasiiyey lacag gaaraysa $120(boqol iyo labaatan doolar ) oo kaash ah.
Shir jaraa’id oo markii dadkaas la rarayey lagu qabtay xarunta ay ku jiraan qaxootiga kasoo cararay dalka yemen ayaa waxa ugu horayn ka hadlay Sh Daahir aw cabdi oo kamid ah culimada soomaaliyeed kuwa ugu caansan isagoo u mahad celiaya Dawlada Puntland ,Ganaacsatada, shacabka Puntland iyo walalaha soomaaliyeed ee dibada ka soo gurmanaayay.
Sheekha oo hadalkiisa siiwata ayaa tilmaamay in galabta ambabixinaynaa 15 bas oo sida 300 qof oo qaxooti ah ,qof walba oo kamid ah dadkaasna waxaan gacanta uga dhiibnay lacag dhan $120 dollar ,waxayna ku wajahan yihiin dadkaani muqdisho.
Gudoomiyada gudiga gurmadka qaxootiga yemen sheikh Axmed yuusuf daad oo isna madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in maanta ay rarayaan qaxooti gaaraya 300 qof dadkaas oo loo ambabixinaya koofurta Soomaaliya gaar ahaan muqdisho .
Gudoomiyada ayaa sheegay in kharash ay ku rarayaan dadkan uu qayb ka yahay lacagihii ay gudiga iyo culimada soo gaarsiiyeen shirkada iyo bulshada soomaaliyeed .
Ugu danbahn tii waxaa gabagabdii munaasabada ka hadlay Wasiir ku xigeenka arimaha gudaha ee Puntland :c/laahi xaashi (qoobdeero) isagoo umahad celiyey culimada iyo gudiga gurmadka qaxootiga howsha ay u hayaan bulshada iyo walalahooda qaxootiga ah.
Wasiirka ayaa sidoo kale Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay in kaalin mugleh ka qaataan ugurmadka dadka qaxootiga ah ee soomaaliyeed isagoo tilmaamay in aan wali kaalintii laga filayey Dowlada iyo gudiga qaxootiga ee muqdisho aan wali laga hayn.